musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Nyowani Sensual Vegan Chocolate
Kufanana nematombo anokosha ari mubhokisi rezvishongo, Nhiär's ganache pralines inopenya mumabhokisi adzo anoyevedza. Yakagadzirwa nekuchenjerera kukuru uye nerudo nemaoko, zvihwitsi zvechokoreti zvakavakirwa pamhando yepamusoro.
Koo yakasimwa kubva kumateru akasvibira eAndes muPeru, aitapira nekutapira kubva kumuchero wemamongi. Kudyara-mukaka kubva kukokonati kana oats yakasanganiswa neiyo yakapfuma yecocoa bhinzi yehunyoro hunyoro, hunyoro. Hapana mukaka wemhuka, hapana shuga yakanatswa, hapana munyu unokanganisa vegan, kunakidzwa kwekuziva. Imwe neimwe yakagadzirwa uye yakashongedzwa zvishoma nemavara anodhaka ezvakasikwa.
Sarah Anyieth akange agara nhaka resipi yemhuri yekare nemashiripiti enyama yetsika dzakakanganikwa netsika dzirimo. Resipi haina kuchinja kudzamara Sarah atora nhanho yeushingi kumberi akadudzira zvakare resipi yechokoreti inodiwa nezvizvarwa.
“Zvakaoma kuwana chokoreti isina emulsifiers, stabilizer, zvinogadzirwa nemukaka, uye shuga yakanatswa. NaNhiär, ikozvino tinopa chokoreti inonaka mune vegan, chirimwa-based form. Isu tinopa chikafu chechocolate kune vanhu vane hanya nehutano vanoda kuzvipa mibairo nguva nenguva,” vanodaro. Sarah anodada nekushandisa organic, yemhando yepamusoro, yakasikwa, uye zvine hutsika zvakabikwa. Zvigadzirwa zvinobva kune zvakarimwa zvakarimwa Fair-Trade certified organic vagadziri.
Iyi yakachena sensuality mune chokoreti fomu zvakare inokurudzira connoisseurs kupfuura vegan nharaunda. Kunyangwe hard-core chokoreti vetsika vanorumbidza iyo inotapira art uye kupururudza nezve chokoreti yaNhiär pasocial media.
Nhiär's product range inochengetwa yakamanikana nemaune. Sarah anotumira zvigadzirwa zvake zvichangobva kugadzirwa nemaoko kune vegan connoisseurs muUS, mabhokisi madiki emabhoni echokoreti mana kana mabhokisi mahombe emabhoni makumi maviri nemana - chipo chakakwana chemaawa erudo kwemaawa maviri kana kukokwa kumanheru echisvusvuro chemanheru.